China 10″ TGP Cup Diamond Grinding Wheel Manufacturing and Factory | Bontai
Kiraro mitoto diamondra
Trapezoid diamondra pads
HTC diamondra pad
Lavina diamondra pad
Hazo diamondra Husqvarna
Terrco diamondra pads
Karazana diamondra Scanmaskin
Kodiarana kaopy diamondra
Diamondra polishing pad
Pads poloney beton
Diamondra PCDs hanesorana ny coatings
Plate mitoto diamondra
Manokana ho an'ny vato
10" TGP Cup Diamond Grinding Wheel ho an'ny fikosoham-bary. Ampiharo amin'ny fikosoham-bary isan-karazany, terrazzo, gorodona vato. Avy amin'ny fikosoham-bary ka hatramin'ny fikosoham-bary tsara, ary ny fanamafisana ny gorodona. connector mahatonga ny asa tsy mandreraka.
Vidin'ny singa: US $10 - 60 / Piece FOB Fuzhou
Haben'ny fizarana: 250*18T*8mm
Fampiasana: Fikosoham-bary sy fametahana gorodona
Grit: 6#,16,30-300# (Azo amboarina)
Fatorana misy: Mafy mafy, mafy be, mafy, antonony, malemilemy, malefaka be, malefaka faran'izay kely
MOQ: 10 piece/bond/grits
Fahaizana famatsiana: 10,000 pcs isam-bolana
Fepetra fandoavam-bola: T / T, L / C, PayPal, sns
Fomba fandefasana: Amin'ny Express, amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra
Fe-potoana: 7-20 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko
10" TGP Diamond Grinding Cup Wheel
Metal + diamondra
Savaivony 7", 10"
Mafy mafy, mafy be, mafy, antonony, malemilemy, malefaka be, malefaka faran'izay kely
7/8"-5/8", 5/8"-11, M14 sns
Araka ny nangatahana
Matoatoa hatramin'ny tsara Fitotoana sy fanamafisam-peo ny gorodona beton
1. Ny kodiaran'ny kaopy diamondra dia tena mahery setra ary misokatra haingana kokoa noho ny diamondra fatorana metaly mahazatra.
2. Izy io dia natao ho an'ny fitotoana simenitra, Terrazzo, granita mafy, marbra, vato namboarina, sns.
3. Safidy tsara ihany koa izy ireo raha te hamorona tafo mirindra tsara ianao rehefa manary gorodona, na eo an-tampon'ny screed na beton.
4. Ny vokatra fikosoham-bary avo lenta, miaraka amin'ny androm-piainany mahomby sy mitombina.
1. Amin'ny maha-famokarana azy, Bontai dia efa namolavola fitaovana avo lenta ary nandray anjara tamin'ny fametrahana ny fenitra nasionaly ho an'ny fitaovana mahery vaika manana traikefa mihoatra ny 30 taona.2. Tsy vitan'ny hoe afaka manome fitaovana avo lenta ihany i BonTai, fa afaka manao ny fanavaozana ara-teknika ihany koa mba hamahana ny olana rehetra rehefa mitoto sy manosotra amin'ny gorodona isan-karazany.
Ny kodiaran'ny kaopy diamondra dia matetika ampiasaina amin'ny fitotoana gorodona simenitra, ambonin'ny vato toy ny granita, marbra. Ity kodiaran'ny kaopy diamondra ity dia azo ampiasaina amin'ny grinder zoro na grinders gorodona.
Amin'ny maha-fitaovana diamondra dia azo itokisana sy mahomby amin'ny fitotoana gorodona simenitra, vato, terrazzo, sns. Mampihena ny lanjany ny famolavolana azy amin'ny lavaka marobe, ka mampihena ny fanjifana angovo ary manatsara ny fahombiazan'ny asa. Ny famaritana ny kofehy dia 22.23mm, M14, 5/8 "-11 ary ny fepetra hafa, azo ampiasaina amin'ny milina isan-karazany mba hihaona amin'ny filana samihafa. Raha mampiasa ny adaptatera ianao, dia mety hifanaraka amin'ny milina bebe kokoa.
Izy io dia manana savaivony 10 santimetatra, ary manolotra savaivony hafa koa izahay. Ny kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary dia manana fizarana daimond 9 lava ary fizarana diamondra fohy 9, 18 amin'ny fitambarany. Ny fizarana dia welded amin'ny vatan'ny kodiarana vy amin'ny alalan'ny teknika welding matetika.
Mpamatsy azo antoka izahay, ny kalitaon'ny vokatra no laharam-pahamehanay. Eo ambanin'ny fepetra fampiasana mitovy, ny vokatray dia manana fiainana lava kokoa noho ny ankamaroan'ny vokatra mitovy karazana. Manana sampan-draharaham-pikarohana sy fampandrosoana izahay miandraikitra ny fampivoarana ny vokatra farany.Miezaka ny fanavaozana tsy tapaka izahay mba hampivelarana vokatra mahomby kokoa sy tsara kokoa. Manantena izahay fa ny vokatray dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fitotoana ary mampihena ny vidiny. Noho izany, raha mila ampanjifaina ny vokatra sasany ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Mpanamboatra fitaovana diamondra matihanina izahay, izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana fitaovana diamondra rehetra. Manana fitaovana fikosoham-bary sy fikosoham-bary isan-karazany ho an'ny rafitra poloney gorodona izahay, ahitana kiraro fikosoham-bary diamondra, kodiaran'ny kaopy diamondra, kodiaran'ny diamondra ary fitaovana PCD sns.
● traikefa 30 taona mahery
● Ekipa R&D matihanina sy ekipa mpivarotra
● Rafitra fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao
● ODM & OEM dia misy
Italia Marmomacc Stone Fair
Feedback ny mpanjifa
1. Mpanamboatra na mpivarotra ve ianao?
A: Azo antoka fa mpanamboatra izahay, tongasoa mitsidika ny orinasanay ary jereo izany.
2. Manolotra santionany maimaim-poana ve ianao?
A: Tsy manolotra santionany maimaim-poana izahay, mila mandoa santionany sy entana ianao. Araka ny traikefan'i BONTAI nandritra ny taona maro, mihevitra izahay fa rehefa mahazo ny santionany amin'ny fandoavana ny olona dia hankamamy izay azony. Na dia kely aza ny habetsahan'ny santionany nefa ny vidiny dia avo noho ny famokarana mahazatra.
3. Inona ny fotoana fanaterana anao?
A: Amin'ny ankapobeny dia maka 7-15 andro ny famokarana rehefa voaray ny fandoavam-bola, miankina amin'ny habetsahanao.
4. Ahoana no handoavana ny fividianako?
A: T/T, Paypal, Western Union, Alibaba ara-barotra antoka fandoavam-bola.
5. Ahoana no ahafantarantsika ny kalitaon'ny fitaovana diamondra anao?
A: Azonao atao ny mividy fitaovana diamondra kely mba hijerena ny kalitao sy ny serivisy amin'ny voalohany. Ho an'ny fatra kely dia tsy manao izany ianao
mila maka risika be loatra sao tsy mahafeno ny fepetra takinao.
teo aloha: 7 Inch 24Seg.Turbo Abrasive Wheels Diamond Grinding Cup Wheels ho an'ny Beton
Manaraka: 10inch 250mm Concrete Floor Diamond Grinding Disc ho an'ny Blastrac Grinder
Ny kodiaran'ny kaopy TGP dia mifanentana amin'ny grinder zoro na grinder gorodona tanana, azo ampiharina amin'ny fitotoana ny gorodona rehetra, toy ny simenitra, terrazzo, gorodona vato sns. Tena shap sy mateza. Ny fatorana isan-karazany dia azo namboarina ho an'ny fitotoana gorodona mafy.
Kodiaran'ny kaopy abrasive
Kodiaran'ny kaopy zana-tsipìka
Kodiaran'ny kaopy China
Kodiarana fikosoham-bary China Diamond Cup
Kodiarana fikosoham-bary kapoaka
Plate kapila fikosoham-bary vita amin'ny diamondra
Plate fikosoham-bary vita amin'ny simenitra
Kodiarana kaopy ho an'ny Beton
Kodiarana kaopy ho an'ny simenitra
Kodiarana fikosoham-bary diamondra
Kodiaran'ny kaopy diamondra
Fitaovana fikosoham-bary sy fanosehana diamondra
Diamond Grinding Cup Whee
Fitaovana fikosoham-bary diamondra
Kodiaran'ny diamondra ho an'ny simenitra
Kodiarana Polisy Diamondra
Kodiaran'ny kaopy misy andalana roa
Kodiarana kaopy fikosoham-bary
Kodiarana kaopy granita
Kodiarana kaopy fitotoana
Disc fikosoham-bary ho an'ny simenitra
Kodiarana fikosoham-bary ho an'ny simenitra
Kodiarana fikosoham-bary Premium L
Kodiarana kaopy diamondra mizarazara
Kodiarana fitotoana mizarazara
Kodiarana kaopy TGP
Kodiaran'ny kaopy Turbo Abrasive
Kodiarana kaopy turbo
Kodiaran'ny kaopy Turbo Diamond Grinding
Kodiarana fikosoham-bary Turbo
Kodiaran'ny kaopy Wave Turbo
7 mirefy 24Seg.Turbo abrasive kodia Diamond Grin...
S karazana fizarana diamondra fikosoham-bary kodiaran'ny abra...
7 mirefy laharana roa diamondra fitotoana kaopy kodia f...
5 mirefy zana-tsipìka diamondra fikosoham-bary kodia ho an'ny Con...
China qualtiy avo 7 mirefy diamondra turbo kaopy con ...
4 mirefy aluminium diamondra fikosoham-bary kodia ho an'ny ...